Nei induction kudziyisa ndiyo yakanyanya hunyanzvi sarudzo yeindasitiri yekugadzira chikafu
Kuomesa kunosanganisira kupa kupisa kuti ikurumidze kubuda evapolatile organic komisheni iripo muchinhu. Semuenzaniso izvo zviripo mumvura, zvinonyungudutsa mumapende, nezvimwe.
Kuomesa inzira inoshandiswa mukugadzirwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana. Iyo minda yatinogona kuisa induction ndeiya inoda kupisa kwakananga kana kusiri kwakananga kuburikidza nesimbi yesimbi.
Yakananga: mota disc mabhureki
Indirect: kuomeswa kwepepa
Pane nzira dzinoverengeka dzekuwana nzira yekuomesa, senge microwave, infrared uye magetsi kuramba. Nekudaro induction inopa akati wandei mabhenefiti pamusoro peidzi nzira.
Induction heat inyanzvi yekugadzira uye isingabatanidzi magetsi ekudziya tekinoroji ine zvakati wandei zvakaita seyakanyanya simba remagetsi, inodzorwa kudziyisa, kuchengetedzeka kwakanyanya, uye kusasvibisa-kusvibiswa. Chinangwa chechinyorwa chino ndechekuvaka izvi nezvimwe zvakanaka zvichibva pane dzakasiyana data resainzi nezve maitirwo ekudziisa induction muindasitiri yechikafu. Tinotenda izvozvo makambani anozoshandisa induction heat mumaitiro avo anozove nekusiyana-siyana munzira dzechikafu dzakasimba uye achakwanisa kutarisana nematambudziko emangwana.
Nezve Induction heat
Iyo induction yekudziya sisitimu (jenareta + coil) inoburitsa magineti iyo induces ikozvino mune conductive zvinhu (reactor mudziyo), iyo inokwira mukupisa. Induction heat inoshanda chete ne conductive uye ferrous zvinhu. Zvichienderana ne zvinhu's magnetic permeability uye ferromagnetic zvivakwa, zvakasiyana simbi zvesimbi, senge simbi, simbi yakakandwa, pakati pezvimwe, inogona kupiswa neiyo induction. Zvisiri-magineti conductive zvinhu zvinogona zvakare kupiswa nekushomeka kwekuita. Induction kupisa kunoonekwa se yakanaka tekinoroji pasteurizing chikafu chemvura, asi the versatility ye induction electric heaters inoita kuti zvikwanise kushandisa mukati dzakasiyana siyana yeindasitiri yechikafu nezvinwiwa sezvinoratidzwa pamufananidzo unotevera:
Induction heat ine zvayakanakira pamusoro peyakajairwa kudziyisa masisitimu (kupokana, mvura inopisa, gasi, chiutsi, nezvimwewo) Sezvo chiri asiri kuonana zviri chaizvo nyatsoshanda, uye kupisa kunogadzirwa mukati mekushanda-chidimbu (sample) izvi zvinoreva kupisa kwakananga yesimbi pamusoro pasina thermal inertia uye hapana conduction kurasikirwa. Uye sezvo induction haidi kudziya-kumusoro kana kutonhora-pasi kutenderera, ita kuti ienderane zvakanyanya nemagetsi-anoshanda anoshanda otomatiki masisitimu. Verenga chinyorwa chizere kuti uzive 5 inonyanya kukosha chokwadis nezve Induction Heating muindasitiri yezvekudya.
1. Induction heat inovandudza kunaka kwechikafu
Heat exchangers powered by induction vane sachinja-chinja uye kupisa kwakananga kumvura inoyerera, nepamusoro kusava nechokwadi kwe ± 0.5 ° C izvi zvinodzivirira tembiricha yepamusoro uye yakakosha kune kudzora reaction kinetics muindasitiri yezvokudya.
Mhedzisiro yekuedza yaR. Martel, Y. Pouliot muYunivhesiti yeLaval-Canada, kuenzanisa mukaka wakasvibiswa neyakajairwa kupisa uye nekupisa kwemukati, yakaratidza kuti pakushanda, muhutano hweUHT pasteurization, nekupisa kwe induction tinogona. dzivisa kana kudzora maitiro aMaillard (Kugadzira zvinonaka uye browning makomisheni) ichi inovandudza maitiro ekunzwa mumukaka uye zvigadzirwa zvemukaka. (Kuti uwane rumwe ruzivo nezve indasitiri yemukaka verenga Appendikisi A)
Zvakataurwa mune rimwe bepa resainzi muBrazil kuti kushandisa ferritic Stainless simbi (inowanzo kushandiswa muInduction heat system) mumiti yekugadzira shuga, ine mabhenefiti akati wandei nekuti simbi iyi ine makemikari uye biologically inert, inoita. kwete kukanganisa kuravira kana ruvara yeshuga uye kuderedza njodzi yekukura kwemicro-organism colony.
2. Induction heat ine simba rakanaka uye kushanda nesimba
Mhedzisiro yekuedza yaBaşaran inoratidza kuti pasteurization system ine induction hita inoda simba shoma uye exergy kupinda kupfuura DPHE.(Exergy inodaidzwa zvakare kuti yechipiri mutemo kunyatsoshanda ibasa rinonyanya kubatsira panguva yekuita)
Basaran et al. uye boka revainjiniya paYunivhesiti yeCelal Bayar-Turkey, vachienzanisa muyero-muyero, induction heater pasteurization system ine DPHE (Double Pipe Heat Exchanger) pasteurization system, ine mabhaira emagetsi, kuongorora simba uye exergy, vakafunga. iyo imwechete tembiricha inowedzera mune ese maviri masisitimu kubva 65 kusvika 110 ° C. Mushure mekuverenga, kune ese maapplication, yakawanikwa inobudirira kana yekutanga mutemo kunyatsoshanda kwekupisa kupisa neiyo inductive kudziyisa system. 95.00% simba rekushandisa uye 46.56% kushanda nesimba nepo iyo yakajairwa yekudziya system ine electric boiler is 75.43% simba rekushandisa uye 16.63% exergy kunyatsoshanda. (Appendix B inopa rumwe ruzivo nezve simba uye exergy).
Nekuda kwemhedzisiro iyi, mainjiniya akagumisa kuti shandisa iyo inductive nzira mumatomatisi pasteurization9, jamu restrawberry, mukaka, uye huchi pasteurization inoshanda zvakanyanya kupfuura iyo DPHE yekudziya system. (Kuti ujekese ruzivo urwu, mafekitari mazhinji anoshandisa mafuta emafuta, uye mafuta emafuta haanyanyi kushanda zvakanaka, 40-65% inoshanda, kupfuura nzira yemagetsi ekutengesa muchidzidzo ichi.).
3. Induction heat system inopa kuderedza kuvhara muhurongwa
Kuvhara nekuda kwezvinhu zvisingadiwi zvakaunganidzwa pachubhu nzvimbo dzeanopisa kupisa ndeimwe ye matambudziko makuru muindasitiri yezvekudya, gunk riri mukati memachubhu aya rinodzikisira zvakanyanya kuyerera kwehuwandu kuburikidza nechubhu bundle. Maererano nemigumisiro yekuedza, izvi zvinogona kuitika kuderedzwa kushandisa electromagnetic induction. R. Martel, Y. Pouliot5 akawana kuti kushanda neinduction huwandu hwe protein panzvimbo yekudziya ishoma. Izvi zvinovandudza kuchenesa kushanda, kuwedzera kugadzirwa kwekuita kureba nekudzikiswa kwemutengo wesimba rekugadzira uye a kuderedzwa kwetsvina-mvura kubva pakuita.
4. Induction kumisikidza inogadzikana uye ine diki kabhoni tsoka
Mazuvano izwi "kuchengetedza" rinoshandiswa kutaura nezve zvese, asi harina kunyatsotsanangurwa zvakanaka. Rosen, Marc & Dincer, Ibrahim akaita tsvakiridzo nezve exergy kunyatsoshanda uye kuenderera mberi, maererano nematanho akati wandei (kuparadza kwehurongwa uye kugadzira bongozozo, kana kushatisa zviwanikwa, kana marara exergy emissions). Vanogumisa kuti nzira inogona kuva" kutsigira" kana iri simba uye simba rinoshanda. Mumashoko aya tinogona kutaura kuti shanda nekupinza kuderedza kukanganisa kwezvakatipoteredza, nekuti zvinopa mukana wekuita zvirinani zvinesimba uye zvesimba.
Kuziva izvi, vagadziri vezvekudya uye zvinwiwa vanozoshanda neinduction vane mukana wakakura wekuve nawo "yakawedzera kukosha " uye zvigadzirwa zvinogara zviripo, zvinoshanda nea tekinoroji yakachena izvo zvichabatsira mukuchengetedza zvakatipoteredza uye kuderedza carbon footprint yeindasitiri yezvekudya.
5. Induction installations inovandudza mamiriro ekushanda kwevashandi
An induction system inovandudza mamiriro ekushanda evashandi ne kubvisa utsi, kupisa kwemarara, mhepo inokuvadza, uye ruzha rukuru muzvivako (Induction inongopisa zvinhu uye kwete musangano). Kupisa ndiko ngozi uye inoshanda ne hapana murazvo wakazaruka kuisa mushandisi pangozi; zvisiri-conductive zvinhu hazvina kukanganiswa uye zvinogona kuwanikwa padyo nenzvimbo yekudziya pasina kukuvara.
Pane hapana high pressure uye hapana chiutsi chinopisa masisitimu uye zvichingodaro zvinogona kudzivirira chero njodzi ne kuputika sezvakaita 2016 mukambani yemukaka mune steam jenareta. (Mu database yeARIA unowana zvinopfuura mazana matatu ezviitiko zvine chekuita nekupisa kwepamusoro zvakaitika muFrance.)
Induction Heating ndeye yakachena tekinoroji innovation yakagadzirirwa kuchengetedza simba, zvichitungamira kune yakanyanya kubereka uye kushanda nesimba. Induction heat inopa inodzokororwa mhando uye nekukurumidza, kusimba kwakanyanya, kubata kushoma kupisa chizvarwa zvakananga, uye kwakaringana pamusoro pebasa-chidimbu.
Mukati medhizaini yekudziisa induction mukuita, mune yakasarudzika yekubatanidza yevashandi inosanganisira mechanika, magetsi, uye makemikari mainjiniya ayo anovimbisa mhinduro yakasarudzika ine yakasarudzika uye inogadziridza maitiro ane yakakwirira mwero wekuvimbika uye kusimba.
Vatengi pasi rese vakagadzirirwa kuti bhizinesi rekudya rive rakanyanya kusimba saka tinokukurudzira kuti ufunge nekushandisa Induction heat yekambani yako kuzadzisa dambudziko rekuenda kukudzikira kwekutsika kweindasitiri yechikafu, tarisa pane 2030 Agenda yeSustainable Development.
induction heat indasitiri application
Categories Technologies Tags induction drying hita, induction kudya kuomeswa, induction chikafu hita, induction kupisa kuomesa, induction heat applications, induction heat yekuomesa chikafu, induction hot air dryers, induction inopisa mhepo yakaoma Post navigation
Induction Fluid Pipeline yekudziya system